COLLIE DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Collie Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Rumaysad, Huntington Charmed Again CGC buluugga mille Collie ee 3 sano jir ah
intee leeg ayey helayaan aussies toy
Liiska eeyaha Collie Mix Breed
Timo Dheer Collie
Collie waa eey weyn oo caato ah oo xoog badan. Dusha sare ee qalfoofku waa fidsan yahay, sunnayaashana way is-qalooceen. Madaxa waa u qaab-eg yahay oo muusiguna waa wareegsan yahay, isagoo taabanaya sanka madow, oo leh istaag yar. Wejiga waa la jeexjeexay. Ilkaha waa inay ku kulmaan qaniinyada maqas. Indhaha dhexdhexaadka ahi waa qaab yicib u eg. Midabka indhuhu waa bunni mugdi ah marka laga reebo meerisyada buluugga ah, halkaas oo ay indhuhu buluug noqon karaan ama midab kasta ka mid noqon karaan. Dhagaha yaryar waa taagnaanayaan 3/4 iyadoo talooyinka horay loo laalaabayo. Qoorta ayaa si cadaalad ah u dheer. Jidhku waxyar buu ka dheer yahay inta uu dheer yahay. Lugaha waa toosan yihiin. Dabada ayaa dhex dhexaad ah iyada oo kor u wareegeysa ama wareegeysa dhamaadka isla markaana hoos loo qaadayo. Waxaa jira laba nooc oo jaakad ah, oo qallafsan oo siman. Koodhka jilicsan wuu dherer badan yahay waana faro badan yahay jirka oo dhan, laakiin wuu ka gaaban yahay madaxa iyo lugaha, jaakaduna waxay sameysataa maro qoorta iyo laabta. Dharka kore waa toosan yahay oo waa ku adag tahay taabashada, jaakaduna way jilicsan tahay waana adag tahay. Noocyada jaakad jilicsan ayaa leh jaakad gaaban oo hal inji ah oo jirka oo dhan ah. Midabada jaakadda labada nooc ee qallafsan iyo kuwa jilicsanba waxaa ka mid ah midabka iyo caddaanka, midabbada madow, caddaan iyo tan, midab buluug ah ama inta badan caddaan leh calaamado meeris oo sable ah, midab leh ama midab leh.
Collie waa eey caqli badan. Xasaasi ah, dabeecad-macaan, macaan, fudud oo tababar iyo daacadnimo leh, badanaa way ku fiican tahay xayawaanka kale iyo eeyga saaxiibtinimada leh eeyaha kale. Waxay kala yihiin xoolo dhaqatada Eydu waxay isku dayi karaan oo ay dhaqdaan dadka, waxayna u baahan yihiin in la baro inaysan sidan sameynin. Aamin, ciyaar, edeb iyo ilaalin xubnaha qoysaskooda kuna wanaagsan carruurta, Collies waxay leeyihiin dareen aan caadi ahayn oo jihada ah. Waa eeyo dabeecad wanaagsan, saaxiibtinimo leh. Waxay ku firfircoon yihiin banaanka. Si wanaagsan u dhexgeli iyaga si looga hortago inay ka digtoonaadaan shisheeyaha. Ma ahan dagaal badan , laakiin waxay u muuqdaan inay ka shakiyaan dadka ay dareemaan gariirka xasilloon ka. Maalin kasta xirmo socod waa muhiim. Iyadoo aan adag, laakiin deggan , kalsooni iyo milkiilaha joogtada ah Hay'ada Caafimaadka Aduunka dejisaa xeerarka oo ku dhegta iyaga, waxay noqon karaan kuwo ula kac ah, oo madax adag oo aan caajis lahayn. Noocani waa inuu noqdaa si tartiib ah loo tababaray , laakiin hawo maamul ama wuu diidi doonaa inuu la shaqeeyo. Nooc nadiif ah, Collie ayaa ah mid xadidan fudud guriga burburin . Milkiilayaasha qaar waxay soo sheegaan in Collies qalafsaneyn aysan jeclayn biyaha sababo la xiriira sida culeyskoodu u kululaado markay qoyaan. Waxaan ku aragnay boogag internet-ka ah oo qulqulaya dabaqadaha Collies, hase yeeshe, sidaas oo ay tahay in badan oo aan ahayn, haddana weligeed ma ahan wax gebi ahaanba ah. Qaar ka mid ah Collies siman ayaa ku guuleystay badbaadinta biyaha.
Miisaanka: Ragga 60 - 75 rodol (27 - 34 kg) Dumarka 50 - 65 rodol (23 - 29 kg)
Guud ahaan eeyaha caafimaadka qaba. Khadadka qaarkood waxay u nugul yihiin PRA, cilladaha indhaha (cilladda indhaha ee loo yaqaan 'Collie eye Syndrome') iyo dhibaatooyinka sinta oo u horseedaya lameness daran iyo arthritis . Collies waxay u baahan karaan xannibaadda qorraxda ee sankooda maadaama ay inta badan u nugul yihiin qorraxda. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 kaasoo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
Collie wuxuu ku eexan doonaa guri dabaq ah illaa inta si ku filan loo jimicsado. Iyagu waxoogaa dhaqdhaqaaq ah kuma jiraan gudaha waxayna ku fiican yihiin ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Xasaasi u ah kuleylka. Sii har iyo biyo fara badan cimilada diiran.
Collie wuxuu u baahan yahay jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan a maalin kasta, socod dheer . Intaas waxaa sii dheer, waxay ku raaxeysan lahaayeen xoogaa jabis ah xarigga aagga nabdoon.
Qiyaastii 14-16 sano
2 - 8 eyyo, isku celcelis 5
Dharka adag ayaa si fudud u daadiya wasakhda iyo cadayga toddobaadlaha ah ee toddobaadlaha ah ayaa ku hayn doona xaalad wanaagsan. Feejignow dheeri ah marka jilicsanaanta, cufnaanta cimaamada la daadinayo. Noocyada jilicsan ayaa leh jaakad hal inji ah waana in la cadayaa mid kasta illaa laba toddobaad. Haddii noocyada dhaadheer ee dhaadheer ay leeyihiin gogol weyn, oo eeyga aan loo isticmaalin bandhig, derinku wuxuu u baahan karaa in la jaro, marka laga reebo in la shanleeyo, si looga fogaado xanuunka eeyga. Maydh ama shaambo qalalan hadba sida loogu baahdo. Collie-ga xun ayaa si xoog leh u daadiya laba jeer sanadkii, Collie-ka simanna waa celcelis daadiya.
Asalka saxda ah ee Collie lama garanayo, laakiin wuxuu ka soo jeeday jiilalka eeyaha xoolo dhaqatada ah ee dadaalka badan. Muddo qarniyo ah Collie-ka dahaarka adag ayaa si dhib yar looga yaqaanay meel ka baxsan Scotland. Collies hore oo qallafsan ayaa ka yaraa, oo leh madax balaaran iyo muzzallo gaagaaban. Eeyaha ayaa loo adeegsaday badbaadinta biyaha, xoolaleyda, lo'da iyo hagida hagida suuqa iyo ilaalinta adhiga ee Scotland iyo England. Magaca dhalashada ayaa laga yaabaa inuu ka yimaado mas'uulkiisa idaha Scottish madow ee loo yaqaan 'Colley'. 1860-yadii boqoradii Victoria ayaa Collies ku haysatay Balmoral Castle oo ku taal Scotland, taasoo ka dhigaysa eeyaha kuwo caan ah. JP Morgan, oo ay weheliyaan maalqabeenno kale, ayaa iska leh shirkadda Collies. Dabayaaqadii 1800-meeyadii ayaa Collie lagu qasay Borzoi, eeyaha oo dhanna waa inay lahaadaan Borzoi dhiig iyaga si ay ugu guuleystaan ​​giraanta showga. Eeyaha shaqeeya ayaa kala go'ay, laamiyay oo noqday noocyada kala geddisan (ee leh Scotch Collie haray) iyo nooca bandhiggu wuxuu noqday waxa aan hadda aragno, eeyaha waaweyn ee wajiyadooda sasabashada badan leh. Collie-ka qalafsan ayaa aad uga caansan kan jilicsan ee Collie. Collie-ka jilicsan ayaa caan ka ah Ingiriiska marka loo eego Maraykanka, laakiin wuxuu xoogaa caan ka yahay gobollada. Collie-ka jilicsan ayaa la mid ah Collie-da adag, laakiin aan lahayn jaakad dheer. AKC waxay tixgelin siisaa Collies qalafsan oo siman sida kala duwanaansho isku nooc ah waxaana lagu xukumaa isku heer marka laga reebo jaakada. Collie kii ugu horreeyay waxaa lagu soo bandhigay show eyga 1860. Collie waxaa aqoonsaday AKC sanadkii 1885. Collie wuxuu caan ku yahay doorkiisa filimka 'Lassie,' wuxuuna kujiraa Collie oo si xun u dahaaran. Awoodaha Collie waxaa ka mid ah dhaqashada, raadinta iyo samatabbixinta, hagaha indhoolayaasha, kacsanaanta, u hoggaansamida tartanka, jilitaanka filimada, iyo sidii ilaaliye iyo ilaaliye.
Neko cunugga xun ee Collie ee jira 4 bilood
Shane kaftanka xun ee Collie
Qaangaar Rough Collie — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Buddy tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah Collie 'Tani waa Buddy oo ah hal sano jir Rough Collie! Isagu waa eey show ah. Markuu ku jiro giraanta show-ga waa mid deggan oo eey halis ah, laakiin guriga dhexdiisa waa mid cayaar badan oo aad iyo aad u firfircoon. Waxyaabaha uu jecel yahay ayaa ku dhex wareegaya daaradda guriga eeygayga kale isla markaana ku jira giraanta showga. Waxyaabaha uu ugu jecelyahay waa subagga looska iyo xarkaha. Wuxuu ka yimid a Collie breed ee Wisconsin. Eeyaha ayaa la soo saaray. Buddy weli kumuu guuleysan bandhigga ugu fiican laakiin waxaan rajeynayaa inuu maalin uun guuleysan doono! :) '
'Dallas waa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah Collie. Magaciisa diiwaangashan waa Solar's Working on a Tan. Isaga waxaa wada sinji by David Schuetz oo ka tirsan Qoraxda Cadceeda ee Indiana. Isagu waa eey aad u caqli badan iyo xayawaan aad u qurux badan. Isaga oo dhan wuxuu ku saabsan yahay FUN! Wuxuu leeyahay tan shakhsiyadeed iyo xiisaha xiisaha leh. Waxaan jecel nahay inuu wax kala jaro! Dallas wuxuu dhawaan bilaabi doonaa xirfadiisa eyga. Waxaa halkan lagu soo bandhigay isagoo 1 sano jir ah. '
Dallas wuxuu tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah Collie ugu ahaa eey u dhashay markuu jiray 4 bilood
Dallas tarjumaadda jilicsan ee Collie ee 1 sano jir
Malcolm oo 4 jir ah, Int. CH Onesti Command 'N' Guul WW-RN, WW-RA, CGC, TT, BPD, VC, CERF
Eeg tusaalooyin badan oo Collie ah
Sawirada Collie 1
Sawirada Collie 2
Sawirada Collie 3
Sawirada Collie 4
Sawirada Collie 5
Sawirada Collie 6
Lassie Classic Collie
Eyga Collie: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
isku dhafka shaybaarka madow
shaybaarka madow iyo baastada isku dar ah
i tus sawir eey jiir ah
chihuahua iyo Jack Russell isku darka